Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A March 2011 (4)
Q and A March 2011 (4)
1. အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါ ခံစား နေရတာ ၃ နှစ် ရှိပါပြီ
2. သားသ္မီး လိုချင်လို့ ဆေးမသုံးကာမှ သားသမီးရဖို့ ခက်ခဲနေပါတယ်
3. အဖြူဆင်းပြီး အနံ့နံလို့ OG နဲ့ ပြဘူးတယ်
4. ကလေးမွေးပြီးတာ ၄ လ ရှိပါပြီ
5. လူပျိုပါ၊ လက်ရှိဖြစ်နေတာက
6. မရိုမသေ ဆီးစပ်ခုံနားက အောင့်ပါတယ်
7. OK တံဆိပ် သားဆက်ခြားဆေးကြောင်း
ကျွန်တော် အသက် ၂၅ နှစ် ရှိပါပြီ။ လက်ရှိ (့) မှာ အလုပ် လုပ်နေပါတယ်။ အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါ ခံစား နေရတာ ၃ နှစ် ရှိပါပြီ။ ၂ဝဝ၈ ခု ၄လပိုင်းလောက်ကနေ စဖြစ်တာပါ။ ဖြစ်တာက ကောင်မလေးက ထားခဲ့တာနဲ့ ခံစားပြီး၊ ညဘက် မအိပ်နိုင်ပဲ အတွေးလွန်တာကနေ စတာပါ။ အဲလိုခံစားတာ တော်တော်တော့ ကြာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လပိုင်းလောက်ပါပဲ။ အခု သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ခံစားတာတွေ တွေးတာတွေလည်း မရှိပဲနဲ့ အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဖြစ်ခါစ မြန်မာနိုင်ငံ မှာတုန်းက ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြော အထူးကုတွေနဲ့ ပြပါတယ်။ ဦးနှောက် အိပ်ပျော်စေတဲ့ ဟော်မုန်း မထွက်တာ ပြောပါတယ်။ မယ်လ်တိုနင်။ ထရွတ်တာ။ စီဒေးဆေးတွေ သောက်ခိုင်းလို့ ၆ လ ၇ လ လောက် သောက်ခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝဝ၉ ကပါ။ ဆေးစွဲမှာ စိုးလို့ ကျွန်တော် ဆက်မသောက်ပဲ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာဆေးကတော့ ကောင်းတယ် ထင်သမျှ အကုန် သောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီရောက်တော့လည်း တရုတ်ဆေးအချို့ သောက်ကြည့်ပါတယ်။ မထူးခြားပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ် ပင်ပန်းအောင် အားကစား လုပ်လည်း မရဘူး။ စိတ်က ဘယ်လောက်ပဲ အိပ်ချင်ပေမယ့် အိပ်လို့မရဘူး။ အိပ်ယာထဲမှာ ၂ နာရီလောက် လိမ့်ပြီးမှ အိပ်ပျော်သလို ခံစားရပါတယ်။ ဘယ်လောက်နောက်ကျမှ အိပ်အိပ် အစောနိုးနေတာပဲ။ စအိပ်ဖို့လည်း ခက်သလို နိုးလာလို့ ပြန်အိပ်လို့လည်း မရပါဘူး။ အိပ်မပျော်ပဲ မိုးလင်းတဲ့ည တော်တော် များများ နေပါပြီ။ အဲရောဂါကို ကြောက်လည်း ကြောက်နေတယ် အမြန်ဆုံးလည်း ပျောက်ချင်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ၄ နာရီလောက်ပဲ အိပ်ပျော်ပါတယ်။ ၄ နာရီ မပြည့်တဲ့ နေ့တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ၆ နာရီလောက် အိပ်လို့ ရတဲ့နေ့ဆိုရင် နောက်နေ့ညမှာ အိပ်ပျော်တဲ့အချိန် နည်းသွားပြန်ပါတယ်။ ဒီရောဂါ မဖြစ်ခင် တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၉ နာရီလောက် အိပ်ပါတယ်။ အချိန် တော်တော် များများလည်း အိပ်ငိုက်ပါတယ်။ စာကျက်ရင်လည်း အိပ်တာပါပဲ။ ခေါင်းအုံးနဲ့ ခေါင်း ထိတာနဲ့ ၅ မိနစ်မကြာဘူး၊ တစ်ခါတည်း အိပ်တာ မနက် နိုးရင် ၉ နာရီ ၁ဝ နာရီပါပဲ။ အခု အဲလို အိပ်စက်ခြင်းမျိုး မရတာကြာပါပြီ။ အခု ခန္ဓာကိုယ်က အဆီများလာပြီး မျက်နှာက မျက်ကြောတွေ စိမ်းလာပါတယ်။ အချိန်ကြာလာလို့လား မသိပါဘူး။ကျွန်တော် မျက်လုံး ထိခိုက်မှာလည်း စိုးတယ်။ မှတ်ဥာဏ်နဲ့ ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်မှာလည်းစိုးတယ်။ စိတ်က ဘယ်လောက်ပဲ အချိန်ပေး အိပ်အိပ် ခန္ဓာကိုယ်က သူအိပ်ချင်ရင် အိပ်မအိပ်ချင် မအိပ်ဖြစ်နေတယ်။ စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့က တစ်ထပ်တည်း မကျဖြစ်နေတယ်။ အိပ်မပျော်တဲ့နေ့ အိပ်ချိန် ၃ နာရီ လောက် ဖြစ်တဲ့ နေ့တွေဆို ခေါင်းနောက်တယ်။ စိတ်လည်း မလန်းဆန်း အလုပ်လုပ်ရင် ခေါင်းတွေ ထူပူနေပါတယ်။ အိပ်ယာဝင် နွားနို့ သောက်လည်း မရ။ ရေနွေးနဲ့ရေချိုးလည်း မရ။
အထူးကုဆရာဝန်နဲ့ ပြထားတာ ကောင်းပါတယ်။ သူညွှန်တာ ရပ်လိုက်တာတော့ သိပ်မကောင်းပါ။ ထိခိုက်လာမှာတွေ အတွက် စိုးရိမ်တတ်တာ ကောင်းပါတယ်။ စိုးရိမ်တာတွေ ဖြစ်မလာအောင် လုပ်မှသာ ပညာရှိရာ ကျပါမယ်။ ရောဂါ ဝေဒနာတွေဟာ အလိုလိုပျောက်တာရှိတယ်။ ရိုးရိုးဆရာဝန်နဲ့ ပျောက်တယ်။ အထူးကုနဲ့မှ ပျောက်တယ်။ တချို့ ဆရာဝန်က သက်သာယုံသာ တတ်နိုင်တာတွေ ရှိတယ်။ အခုရောဂါကို သေခြာကျနကုသရင် ကောင်းမှာပါ။
“Sleeping မအိပ်ဘဲနေ အသက်မရှည်” ကိုလဲ ဖတ်ပါ။
Q 6: ကျွန်တော်တို့ ဇနီးမောင်နှံ စီးပွားရေးကြောင့် (့) မှာ ခတ္တခဏရောက်နေပါတယ်။ အိမ်ထောင်သက်က ၁ဝ ကျော်ပါပြီ။ အိမ်ထောင်ပြုစက သုံးလခံ ခရမ်းပြာ ဒီပိုဆေးကို (၄) ကြိမ်ထက်မနည်း သုံးဖြစ်ပါတယ်။ နောက် အမှန်တကယ် သားသ္မီး လိုချင်လို့ ဆေးမသုံးကာမှ သားသမီးရဖို့ ခက်ခဲနေပါတယ်။ နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်နဲ့လည်း ပြကြည့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကို တစ်ကြိမ်တည်းစစ်ပြီး ကောင်းတယ်ပြောပါတယ်။ ဇနီးကိုတော့ ဓမ္မတာတာလာပြီး ဒုတိယရက်နဲ့ (၁၁) မြောက်နေ့တွေမှာ အန်ထရာဆောင်းနဲ့ တစ်လနှစ်ကြိမ် သေချာစစ်ဆေးပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် ဓါတ်ပုံပါ ပေးပါတယ်။ ဒုတိယနေ့ စစ်ဆေးတဲ့အခါတိုင်း စားဆေး(၅)ရက်စာ ပေးပါတယ်။ (၁၁)ရက်နေ့မှာ သားမျိုးဥ ကြွေ/မကြွေ စစ်ဆေးပါတယ်။ (၁၁) ရက်မြောက်ကစပြီး တစ်ပတ်ကြိုးစားဖို့ ပြောပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ ဒီလိုစစ်ဆေးလာတာ (ဂ)လ ကျော်လာပါပြီ။ ညွှန်ကြားသလို လိုက်နာပြီး ကြိုးစားပေးမယ့် ထူးခြားမှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ဆရာဝန် မပြတော့တာ (၅)လကျော်လာပါပြီ။ ဒီတစ်လမှာ ဇနီးသည်က လေတွေ ခဏခဏအန်နေတော့ စိတ်ထဲလှုပ်ရှာမှု ဖြစ်မိပါတယ်။ ရေသောက်လို့လည်းမရ အစာလည်း စားမရပါ။ ရက်တွက်ကြည့်တော့ ဓမ္မာတာလာပြီးတာ (၃)ပတ်တည်း ရှိပါသေးတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှာတာနဲ့ သူမနက်အိပ်ယာထ ဆီးယူပြီး စစ်ဆေးကြည့်တာ အဖြေက မလှဘူး။ အကြံဥာဏ်ပေးပါအုံး။
ကလေးရဘို့ဆိုတာ ခက်တဲ့သူတွေမှာ တကယ်ခက်ပါတယ်။
ခေတ်နည်းတွေပေါ်တာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ လူတိုင်းကို မရနိုင်သေးပါ။
ကျွန်တော်ရေးတဲ့ စာ ၂ ပုဒ်လုံး ဖတ်ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ရှာမတွေ့ရင် ပြောပါ။
သုံးဘူးတဲ့ ဆေးအရှိန်က ကြာလေ ပျောက်သွားလေ ဖြစ်ပါတယ်။
စာထဲကရေးတာမှာ သိခြင်တာ၊ အခက်အခဲလို့ ထင်တာရှိရင် ပြောပါ။
ကျန်းမာ-ချမ်းသာကြပါစေ။ သားသမီး ရတနာများ ထွန်းကာပါစေ။
Fri 3/11/2011 11:44 AM
သမီး အသက်က (၂၉)ပါ။ အိမ်ထောင်ကျတာ ၅ နှစ်ဝန်းကျင်ရှိပါပြီ။ ကလေးလည်းရှိပါတယ်။ သားအိမ်ထဲမှာ သားဆက်ခြားတဲ့ ပစ္စည်းထဲ့တားပါတယ်။ ဆက်ဆံတဲ့အခါ လျှာရော လက်ရော သုံးရင် ဘာဆိုးကျိုးရှိနိုင်ပါသလဲ။ တစ်ခါက အဖြူဆင်းပြီး အနံ့နံလို့ OG နဲ့ ပြဘူးတယ်၊ ဆေးနာမည်တွေတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး ဆေးသောက်ပြီး ကတည်းကတော့ တပ်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဆက်ဆံပြီးတိုင်း သုတ်ရည်ပြန်ထွက်တာတွေကလည်း တအားများတယ်။ အနံ့နည်းနည်းရှိတယ်။ ဘာဖြစ်လိုများလဲ သိချင်ပါတယ်။ ရာသီလာတဲ့အခါလည်း Tampon သုံးပါတယ်။ Public hair လဲ အမြဲရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်း မကောင်း သိချင်ပါတယ်။ ကလေး မွေးပြီး တစ်လလောက်ကတည်းက မိခင်နို့မစို့လို့ နို့ခမ်းဆေး သောက်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လားမသိဘူး သမီး ရင်သားက တအားပျော့နေပါတယ်။ တွဲကျတာတော့ မဟုတ်ပေမယ်။ ပျော့နေတော့ သိပ်မကောင်းဘူးပေါ့။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။ အရင်လို တင်းတင်းလေး ပြန်ဖြစ်ချင်လိုပါ။ နည်းကောင်းလေးရှိရင် အကြံပေးပါဦးနော်။
(အိုရယ်လ်) သုံးတဲ့ အကြောင်းရေးထားတာ ဖတ်ချင် ဖတ်ဘူးမှာပေါ့။ နှစ်ယောက်လုံးမှာ ဒီလမ်းကြောင်းက ကူးနိုင်တဲ့ ရောဂါ မရှိရင် စိုးရိမ်စရာ မများပါ။ ပုံမှန် သန့်ရှင်းရေးသာ ဂရုစိုက်ပါ။
ပစ္စည်းထဲ့တားလဲ များသောအားဖြင့် ၅ နှစ်အထိ ထားနိုင်ပါတယ်။
ရင်သား အဲလိုဖြစ်တာကို ပြန်တင်းဘို့ သိပ်တော့မလွယ်ပါ။ နောက်ကိုယ်ဝန်ရမှသာ ပြန်တင်းနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ထောက်ကူနိုင်တာလဲ ရှိပါတယ် ဒါကိုလဲ ရေးထားတယ်။
သုတ်ရည် ပြန်ထွက်တာလဲ ရေးထားတယ်။ သုတ်ရည်ထွက်တာက ကလေး မရမှာကိုသာ ဖြစ်စေစေနိုင်ပါတယ်။ အနံ့နဲနဲက ပုံမှန်ပါ။ ယားတာ၊ နာတာ၊ အနာပေါက်တာ၊ ဆီးအောင့်အတွက်သာ ဆေးလိုပါမယ်။
ဖတ်ချင်တာ ရှာမတွေ့ရင်တော့ ပြောပါ။ တိုက်ရိုက် ပို့ပေးပါမယ်။
ဆရာရှင့် သမီးဒီနေ့ ဆေးစစ်ကြည့်တာ သွေးစစ်တဲ့အဖြေက ဒါတွေရပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့တော့ မတွေ့ရသေးပါဘူး။ Lab က အဖြေကို အွန်လိုင်းက ပို့ပေးထာတာပါ။ အဲဒါတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါရှင်။ ကလေးမွေးပြီးတာ ၄ လ ရှိပါပြီ။ ၄၅ ရက် ပြည့်တုန်းက (ORTHO MICRONOR TABLETS 28'S) ကို ၁၅ လုံးပဲ သောက်ပါတယ်။ နောက် ဆတ်မသောက်တော့ပါဘူး။ နောက် ၄ ရက် လောက်နေတော့ ရာသီလာပါတယ်။ ရက်က (၁၅၊ ၁၊ ၂ဝ၁၁) ပါ။ အဲဒါ နောက်ဆုံးလာပြီး ခုထိမလာတော့သေးဘူး။ ကိုယ့်ဖာသာ Urine Pregnancy test စမ်းကြည့်တာလဲ Negative ပဲပြပါတယ်။ ဘာလို့ ရာသီမလာတာလဲ သိချင်လို့ပါ။ ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်ပါသလား။ အမျိုးသားနဲ့ အတူတူနေတော့ ကွန်ဒုံး သုံးပါတယ်။ တခါတလေ အရည် အပြင်ထုတ်ပါတယ်။ သမီးအသက်က ၂၇နှစ်ပါ။
သွေးစစ်တာ အားလုံးကောင်းပါတယ်။ ဆေးကို ရပ်လိုက်ရင် သွေးပြန်ဆင်းတယ်။ ရာသီပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ ကလေး ခြားချင်သေးရင် တားနည်းကို အဆင်ပြေဆုံးနည်း တခုခုသုံးပါ။
Ortho Micronor ဆေးက (ပရိုဂျက်စတီရုန်း) ဟော်မုန်း တမျိုးထဲပါတဲ့ ကိုယ်ဝန်တား စားဆေးဖြစ်တယ်။ ဆေး ၁ ပြားမှာ 0.35 mg Norethindrone ပါတယ်။ မျိုးဥ မထွက်စေဘူး၊ သားအိမ်အဝထဲက အချွဲကို စေးပျစ်စေတယ်၊ သားအိမ် အတွင်းလွှာကို ပါးစေတယ်။ အစာနဲ့ နီးနီးဝေးဝေး သောက်နိုင်တယ်။ ရာသီ စလာတဲ့နေ့က စသောက်ရမယ်။ နေ့တိုင်း အချိန်မှန် သောက်သင့်တယ်။ ဆေးတကပ်နဲ့ နောက်တကပ်ကြား ရက်မခြားစေနဲ့။ ၉၅% ကနေ ၉၉့၅% အထိ စိတ်ချရတယ်။ ကလေး နို့တိုက်နေသူတွေ သောက်သင့်တယ်။
ကျွန်တော့် အသက်က လက်ရှိ ၃ဝ ထဲမှာပါ။ အသက် ၂ဝ လောက်မှာ ငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ဘူးပါတယ်။ ကွီနင်းတွေ သောက်ရပါတယ်။ ဆေးရုံလဲတတ်ဘူးတယ်။ ခု လက်ရှိက (့) မှာ နေပါတယ်။ လူပျိုပါ၊ လက်ရှိဖြစ်နေတာက
(၁) ဝမ်းချုပ်ပါတယ်။ အမြဲ တမ်းလိုလိုပါပဲ။ အသက် ၂၄ လောက်က စပြီးပေါ့။
(၂) ဆီး ခဏခဏ သွားတယ်။ ညဘက်ဆိုရင် အနည်းဆုံး၎ခါ လောက်သွားရတယ်။ မိုးအေးတဲ့ ညဆိုရင် ၇ ခါလောက်ကို သွားရတယ်။ ရေကိုမသောက်ရဲအောင်ပဲ။
(၃) အရက် ဘီယာသောက်ရင် ခြေဖမိုးတွေယားပြီး ယောင်လာတယ်။ ဖိကြည့်ရင် ပိန်သွားတယ်။ ခုမသောက်တော့ပါ။
ရိုးရိုးရေ သောက်နေရင် ဆီးနီချင်နီပေမဲ့ အရက် သောက်ပြီးရင်တော့ ဆီး လုံးဝကိုဖြူတယ်။
(၄) ဆီးကျောက်တည်ဘူးပါတယ်။ ခွဲတော့မခွဲရပါဘူး။ ဒုတိယအခေါက်ကျတော့ ဆေးစားလိုက်တော့ ကောင်းသွားပါတယ်။ ၂ ခါ ဖြစ်ဘူးတာပါ။
(၅) နှုတ်ခမ်းတွေ အမြဲ ခြောက်နေတယ်။ ရေများများသောက်ကြည့်တော့လဲ ဆီးခဏခဏသွားတာပဲရှိတယ်။ ထူးမလာပါဘူး။ အလုပ်က ချွေးထွက်နဲတယ်။ ထွက်ကိုမထွက်တာပါ။ ကျွန်တော့ဆီက ဘယ်တုံးကမှ ချွေးနံ့ မနံဘူးဘူး။ (၆) လူတော်တော် ပိန်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရင် ပိန်သွားတယ်လို့ပဲ အမြဲပြောခံရပါတယ်။
ဆီးချို စစ်ပါ။ ရှိရင် ဆေးကုပါ။
သွေးတိုးစစ်ပါ။ ရှိရင် ဆေးကုပါ။
ကိုယ်အလေးချိန် တိုးချင်ရင် သကြားဓါတ် (ကဇီဓါတ်၊ အချို) များများစားရတယ်။ ဆီချိုမရှိမှသာ စားရမယ်။
ဆေးစစ်ပြီးနောက် လိုသေးတာ မေးပါ။
သမီး သူငယ်ချင်းမှာ သားအိမ်ခြစ်ထားရတာ ဆရာ့ကိုတစ်ခါ စာရေးမေးမြန်းဘူးပါတယ်။ သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ သက်သာပါတယ်။ အတော်ကိုနေကောင်းနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့မနက် သူက ခြံထဲက ရေကန်ကျင်းတာကို သွားပြီး ကူလုပ်တာ ရေပုံးတွေ အခေါက်တော်တော်များများ သွားကူဆွဲလိုက်တယ်ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း မရိုမသေ ဆီးစပ်ခုံနားက အောင့်ပါတယ်။ သမီးတို့ ဆေးခန်းကို ဒီတစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်း ပြန်သွားပြပါမယ်။ မသက်သာရင်ပေါ့။ စိုးရိမ်ရပါသလားဆရာ။ သားအိ်မ်တွေ ဘာတွေ လျောကျတတ်ပါသလား။ သူ့ကို ဒီနောက်ပိုင်းလုံးဝ ဂရုတစ်စိုက်နေဖို့ မှာထားရပါတယ်။ သမီးသူငယ်ချင်းအတွက် တအားစိုးရိမ်နေလို့ပါ။ ရှင်းပြပေးပါအုံး။ သားအိမ်လျောပြီး နောက်နောင် ကလေး မရမှာ တအားကြောက်နေပါတယ်။ သူလည်း ရှောင်ရန် ဆောင်ရန်များကို ရှင်းပြပေးပါ။ ဆီးစပ်နားက အောင့်တာက တစ်ခါတစ်ခါ ထိုး အောင့်တယ်။ ကျန်တဲ့အချိန် နည်းနည်း နာနေတယ်။ အဲ့လိုဖြစ်တာပါ ဆရာ။
ဆီးစပ်နေရာ နာ-အောင့်တာက ဆီးအိမ် နဲ့ မွေးလမ်း တခုခုဖြစ်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆီးအောင့်တာ၊ ရာသီ၊ သာပျက်၊ သားအိမ်ရောင် စတာတွေ။ ဖြစ်တာတခုစီမှာ တခြားခံစားရတာတွေနဲ့တွဲနေလိမ့်မယ်။ ဒါတွေမသိရဘဲ ရောဂါကို မှန်းပြောလို့ မရပါ။
သားအိမ်ကျမှာ စိုးသူတွေ အခုပို့တဲ့စာကို ဖတ်စေပါ။ လိုက်နာစေပါ။ လိုသေးတော့ မေးပေါ့။
“Pelvic floor exercises အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက် လေ့ကျင့်ခန်း” ကို ဖတ်ပြီး လုပ်စေပါ။
အခု မြန်မာပြည်မှာ ရောင်းချနေတဲ့ OK တံဆိပ် သားဆက်ခြားဆေးကြောင်းလေး သိချင်လို့။ သုံးစွဲပုံနည်းလေးလည်း သိချင်လို့ပါ။ ဆရာရဲ့ဘောလော့မှာရေးသားထားတဲ့ သားဆက်ခြားဆေးနည်းတွေက ရာသီလာပြီး ၅ ရက်ကနေ ဆေးကို သောက်သုံးရပြီး 0k တံဆိပ်မှာတော့ ရာသီလာလာခြင်း သုံးစွဲခိုင်းပါတယ်။ အဲဒီဆေးကို ဘာကြောင့် အဲဒီလိုသုံးစွဲရလဲဆိုတဲ့ ခြားနားချက်လေးသိချင်လို့ပါ။ နောက်ပြီး 0k တံဆိပ်ဆေးကို ရာသီလာပြီး ၅ ရက် အကြာမှာရော သုံးစွဲလို့ မရဘူးလား။ တကယ်လို့ ၅ ရက်အကြာမှာ သုံးစွဲရင် ဘယ်လိုသုံးစွဲလို့ရလဲ ဆိုတာလေး သိချင်လို့ပါ။
OK ထဲမှာ ဘာပါသလဲတော့ မသိပါ။ မှန်ပါတယ်။ လဆက်သောက်သူတွေဟာ ဒီဆေးမျိုးကို ရာသီ စလာတဲ့နေ့ကနေ စပြီးသောက်ရပါတယ်။ နောက်ကျရင် စိတ်မချရတဲ့ % ပိုနိုင်တယ်။ ဒီဆေးမျိုးကို ပဌမဆုံး သောက်သူတွေက ရာသီလာပြီး ၅ ရက်အထိ မသောက်ဘဲနေပေမဲ့ ကလေးမရနိုင်သေးတဲ့ ရက်တွေ ဖြစ်နေလို့ ပြောတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။